Manchester United Oo Lagu Soo Waramayaa Inay Raadineyso Saxiixa Ciyaaryahanka Khadka Dhexe Ee Ecuador Moises Caicedo.
HomeSuuqa kala iibsigaManchester United oo lagu soo waramayaa inay raadineyso saxiixa ciyaaryahanka khadka dhexe ee Ecuador Moises Caicedo.
Manchester United ayaa isha ku heysa inay heshiis la gaarto ciyaaryahanka khadka dhexe ee Ecuador Moises Caicedo iyadoo qeyb ka ah dadaalkooda joogtada ah ee ay ku doonayaan inay ku soo xerogeliyaan dhalinyarada ugu fiican adduunka.
United ayaa maalgashi xoog leh ku sameysay ciyaartoy da ’yar oo aan la shaacin sanadihii ugu dambeeyay. Saxiixa ann 9m ee Hannibal Mejbri ee 2019 wuxuu ahaa mid kamid ah kuwa aadka loogu soo kordhiyay kooxda, sidoo kale kooxda waxay qarash gareysay 40m si ay u keento Facundo Pellistri iyo Amad Diallo inta lagu gudajiray xagaaygii hore.
Waxay umuuqataa in Caicedo laga yaabo inuu ku xigo, warar badan ayaana soo jeedinaya in United ay raadineyso inay heshiis la gaarto 19 jirkaan khadka dhexe isbuucyada soo socda.
Waxay ku bilaabatay suxufiga reer Ecuador ee Marco Lopez Castillo, oo daaha ka qaaday warkiisa isla markiiba ay taageereen shabakada reer Argentine ee TyC Sports, taas oo xustay in masuuliyiinta kooxdu ay si aan caadi ahayn ugu sarreeyaan xiddigga Independiente del Valle.
Xiisaha Caicedo waxaa haatan xaqiijiyay Manchester Evening News, oo intaas ku daray in United ay ku rajo weyn tahay inay lasoo wareegto…